Android Messages ကိုသုံးပြီး ကွန်ပျူတာကနေ ဘယ်လို Message ပို့ကြမလဲ?
22 Jun 2018 . 3:52 PM
Google ကနေပထမဆုံးအနေနဲ့ Website ကနေ Messages တွေပေးပို့နိုင်တဲ့ Feature ကို ပြီးခဲ့တဲ့ ရက်ပိုင်းကနေ မိတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။ အခု Feature က Android Messages App ကတစ်ဆင့် ဆောင်ရွက်မှာဖြစ်ပြီးတော့ စမတ်ဖုန်းက ကိုယ့်အနားမှာ မရှိတဲ့အချိန်မှာ ကိုယ့်ကွန်ပျူတာကနေ Messages ပေးပို့နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
Android Messages App က Google ရဲ့ Pixel ဖုန်းတွေနဲ့ Pure Android ကို အသုံးပြုထားတဲ့ဖုန်းတွေမှာတော့ ပါဝင်ပြီးဖြစ်ပေမယ့် တခြားသော Android ဖုန်းတွေအတွက်ကတော့ Android Messages App ကို ထည့်သွင်းဖို့ လိုအပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။
အခု Android Messages App ကို သွင်းထားပြီးရင်တော့ “messages.android.com” Website ကို ဝင်ရောက်ပြီးတော့ အဆိုပါ Website က QR Code ကို Scan ဖတ်ပြီး ဝင်ရောက်ရမှာပါ။
ပြီးရင်တော့ Android ဖုန်းမှာရှိတဲ့ Android Messages ကို ပြန်လည်ဝင်ရောက်ပြီးတော့ ညာဘက်အပေါ်ထောင့်မှာရှိတဲ့ “Messages for web” Option ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင် “Scan QR Code” ဆိုပြီး အခုနက Website မှာရှိနေတဲ့ QR Code ကို Scan ဖတ်လိုက်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ အခုလို Scan ဖတ်ပြီးရင်တော့ Android Messages တွေကို Web Browser မှာ အသုံးပြုလို့ရသွားပါပြီ။
လောလောဆယ်မှာ ယခု Android Messages ကို Chrome ၊ Firefox ၊ Microsoft Edge နဲ့ Safari Browser တွေမှာ အသုံးပြုလို့ရနေပြီလို့ သိရပါတယ်။ အခု Android Messages Web Version ရဲ့ အားသာချက်တွေကတော့ Dark Mode ပါဝင်တာ၊ ခဏခဏ Scan ဖတ်ဖို့ မလိုအပ်အောင် ကွန်ပျူတာကို Remember ပြုလုပ်ထားဖို့တော့လိုအပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် အခုလို Web Browser ကနေ Messages ပေးပို့နိုင်ဖို့အတွက် ချိတ်ထားတဲ့ Android ဖုန်းက ပါဝါဖွင့်ထားပြီး အင်တာနက်ပါ ဖွင့်ထားဖို့ လိုအပ်မှာပါ။
Google ကနပေထမဆုံးအနနေဲ့ Website ကနေ Messages တှပေေးပို့နိုငျတဲ့ Feature ကို ပွီးခဲ့တဲ့ ရကျပိုငျးကနေ မိတျဆကျခဲ့ပါတယျ။ အခု Feature က Android Messages App ကတဈဆငျ့ ဆောငျရှကျမှာဖွဈပွီးတော့ စမတျဖုနျးက ကိုယျ့အနားမှာ မရှိတဲ့အခြိနျမှာ ကိုယျ့ကှနျပြူတာကနေ Messages ပေးပို့နိုငျမှာဖွဈပါတယျ။
Android Messages App က Google ရဲ့ Pixel ဖုနျးတှနေဲ့ Pure Android ကို အသုံးပွုထားတဲ့ဖုနျးတှမှောတော့ ပါဝငျပွီးဖွဈပမေယျ့ တခွားသော Android ဖုနျးတှအေတှကျကတော့ Android Messages App ကို ထညျ့သှငျးဖို့ လိုအပျမှာဖွဈပါတယျ။
အခု Android Messages App ကို သှငျးထားပွီးရငျတော့ “messages.android.com” Website ကို ဝငျရောကျပွီးတော့ အဆိုပါ Website က QR Code ကို Scan ဖတျပွီး ဝငျရောကျရမှာပါ။
ပွီးရငျတော့ Android ဖုနျးမှာရှိတဲ့ Android Messages ကို ပွနျလညျဝငျရောကျပွီးတော့ ညာဘကျအပျေါထောငျ့မှာရှိတဲ့ “Messages for web” Option ကိုနှိပျလိုကျမယျဆိုရငျ “Scan QR Code” ဆိုပွီး အခုနက Website မှာရှိနတေဲ့ QR Code ကို Scan ဖတျလိုကျရမှာပဲဖွဈပါတယျ။ အခုလို Scan ဖတျပွီးရငျတော့ Android Messages တှကေို Web Browser မှာ အသုံးပွုလို့ရသှားပါပွီ။
လောလောဆယျမှာ ယခု Android Messages ကို Chrome ၊ Firefox ၊ Microsoft Edge နဲ့ Safari Browser တှမှော အသုံးပွုလို့ရနပွေီလို့ သိရပါတယျ။ အခု Android Messages Web Version ရဲ့ အားသာခကျြတှကေတော့ Dark Mode ပါဝငျတာ၊ ခဏခဏ Scan ဖတျဖို့ မလိုအပျအောငျ ကှနျပြူတာကို Remember ပွုလုပျထားဖို့တော့လိုအပျမှာဖွဈပါတယျ။
ဒါပမေယျ့ အခုလို Web Browser ကနေ Messages ပေးပို့နိုငျဖို့အတှကျ ခြိတျထားတဲ့ Android ဖုနျးက ပါဝါဖှငျ့ထားပွီး အငျတာနကျပါ ဖှငျ့ထားဖို့ လိုအပျမှာပါ။